15% Off On Total Bill အသေးစိတ်
ပရိုမိုးရှင်း Mr.BOWL Mala Xiang Guo & Hot Pot
Weekly Mobile App ပြပြီး ငွေရှင်းရင် Mr.Bowl မှာ ဘာပဲစားစား (15) % Discount တဲ့… မာလာရှမ်းကော Crazy ဆိုရင် Mr.Bowl ကို မသိတဲ့သူဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်…
မာလာရှမ်းကော တင်မကဘူး ? အမွှာ လို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့ ဟော့ပေါ့ ပါရတယ်ဆိုတော့ မာလာရှမ်းကောလား ? ဟောပေါ့လား ? အငြင်းပွားနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့…
ဒါပဲမဟုတ်ဘူးနော်… ယနေ့ခေတ်မှာ လူအကြိုက်များဆုံး အစားအစာတွေထဲ ပါဝင်နေတဲ့ ယိုးဒယောင်း အထောင်းတွေလည်း ယိုးဒယားလက်ရာအတိုင်း ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…
ရနိုင်တဲ့ အသား အငါး အသီးအရွက်တွေကတော့ မာလာရှမ်းကော ဆိုင်ကြီးတော်တော်များများ နဲ့ အတူတူပါပဲ… မတူတဲ့ အချက်တွေကိုပြောပါဆိုရင်တော့ ဈေးနူန်းက Fair ဖြစ်တယ် …. အရသာကလည်း ပုံမှန်တွေ နဲ့ မတူတဲ့ အရသာလေးမျိုးပေးစွမ်းနိုင်တာကတော့ Mr.Bowl ရဲ့ အားသာချက်လေးတွေပါပဲ….
မာလာရှမ်းကော ဆိုရင်လည်း Set အလိုက်မဟုတ်ပဲ… ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ ဟာရွေးထည့်နိုင်တော့ မကြိုက်တဲ့ဟာတွေ အလေ့အလွှင့်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့… ဟောပေါ့ဆိုလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ တစ်ပွဲချင်းစီကို မှာပြီးစားလို့ရတဲ့ A La Carte Style လေးပါ… မာလာရှမ်းကောဆိုရင် အရည် နဲ့ ရော အရည်မပါတာရော ရသလို ဟောပေါ့ ရဲ့ အရသာကလည်း တုံရမ်း ၊ မာလာ ၊ အချို ၊ အစပ် ဆိုပြီး (၄) မျိုး ရနိုင်ပါတယ်….
ဆိုင်ခွဲကတော့ ရေကျော် City Mart နဲ့ ရန်ကင်း စင်တာ တွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့ ဈေးဝယ်ထွက်ရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ရှော့ပင်း ထွက်ရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် Mr.Bowl ရဲ့ တစ်မှုထူးခြားတဲ့ အရသာလေးကို ဝင်ရောက်မြည်းစမ်းကြည့်ရင်း B&F Mobile Application နဲ့ (15) % ပရိုမိုးရှင်း ယူခဲ့ကြအုန်းနော်…
Mr. Bowl Mala Xiang Guo
ရေကျော် City Mart ၊ ပထမထပ်၊ ပုစွန်တောင်မြို့နယ်
ရန်ကင်းစင်တာ၊ ပထမထပ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်
B&F Mobile Application နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 099 895711240 , 09 895711235 ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်….
- B&F Mobile Application Mr.Bowl စာမျက်နှာထဲက Use Now ခလုတ်လေး နှိတ်ပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာလေးကိုပြပြီး Total Bill မှာ 15% ပရိုမိုးရှင်းရယူနိုင်ပါတယ်...
- ပရိုမိုးရှင်းသက်တမ်းမှာ 20.July.2020 မှ 20.Oct.2020 အထိအကျုံးဝင်ပါသည်..
- ပရိုမိုးရှင်း ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ ကာလအတွင်း ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းများ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်...
Mr.BOWL Mala Xiang Guo & Hot Pot ဆိုင်
ဖုန်းနံပါတ် : 0977897629
Ends Tuesday, October 20, 2020